Dawlada Gobaleedka Juba land oo cawda u jaray xukuumada xamar inta doorshadu u dhamaanayso | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dawlada Gobaleedka Juba land oo cawda u jaray xukuumada xamar inta doorshadu...
Dawlada Gobaleedka Juba land oo cawda u jaray xukuumada xamar inta doorshadu u dhamaanayso
Maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inaysan wax wadashaqeyn ah ah la yeelan doonin mas’uuliyiinta Federaalka Soomaalia, ilaa inta laga soo afjarayo howlaha doorashada maamulkaas ee foodda nagu soo heysa.
Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wareysi uu siiyay BBC-da ku sheegay inuu faraha kasii baxay xiriirkii u dhaxeeyay maamulkooda iyo dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Annaga ayaa mamnuucnay wadashaqeyntii nagala dhaxeysay dowadda Federaalka, aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go’aankaas markii uu kasoo baxay golaha wasiirrada, inta ay doorashadu ka dhaceyso waan joojinay wadashaqeyntooda, way isku dayeen in wasiirkooda arrimaha gudaha uu soo fara galiyo arrinta iyo howsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha, waana ugu sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba”, ayuu yiri Wasiirka.
Wuxuu sheegay in ay labada dhinac isku mari la’yihiin raacista dastuur-ka, laakiin go’aankoodu uusan ka dhigneyn inay ka go’een Federaalka intiisa kale.
“Federaalka kama madax bannaanin, mana dooneyno inaan ka madax bannaanaanno, waxaana leenahay aqoonsada dastuurka dalka u yaalla, inta ay doorashadu socotana naga daaya carqaladda iyo faragalinta, markii ay dhammaatana diyaar baan u nahay wixii wadashaqeyn iyo dood ah”.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda horey u sheegtay in qabanqaabada doorashada Jubaland aan loo marin hanaanka destuuriga ah, isla markaana liiska odayaal dhaqameedka uu guddiga doorashada ku dhawaaqay aanu ahayn kii saxda ahaa ee u diiwaangeshanaa Jubaland.
Musharrixiinta qaarna waxay diideen inay iska diiwaan geliyaan guddiga doorashooyinka Jubaland, iyagoo ku eedeeyay in guddiga uusan dhexdhexaad ahayn oo uu u shaqeynayo musharaxa xilka haya ee Axmed Maxamad Islan, Axmed Madobe.
Khilaafka Jubbaland iyo dowladda dhexe ayaa soo jiitamayay muddo dheer, wuxuuna cirka isku sii shareeray markii uu soo dhawaaday wakhtiga doorashada.
Kulankii Saraakiisha Amisom iyo maamulka Jubbaland
Wasiirka warfaafinja Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa uu ku saabsanaa kulankii ay yeesheen saraakiisha AMISOM iyo madaxda Jubbaland.
“Maanta waxaa Kismaayo yimid janaraalladii howlgalka Amisom, ujeeddada socodkoodu waxay ahayd inay indha indheeyaan habsami u socodka diyaargarowga doorashada, waxay la kulmeen guddiga amniga iyo madaxweynaha, howlaha ammaanka ayaana laga wada hadlay. Sidoo kale Janaraalka ugu sarreeya Amisom wuxuu halkaas ka caddeeyay inaysan jirin faragalin ay ku hayaan arrimaha doorashada Jubbaland, wuxuuna yiri ‘annagu siyaasad shaqo kuma lihin, doorkeennu waa difaaca’, haddii ilaalada Amisom aan u baahannahayna wuxuu sheegay inay nagu taageeri doonaan booliska Amisom” ayuu yiri Injineer Cabdi.
Dhanka kale, wafdi ka socda urur goboleedka IGAD ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugan magaalada Kismaayo, waxayna u kuur galayaan hannaanka doorashada iyo sida ay maamulku wax u wadaan.
Wafdigan ayaa kulamo la yeeshay guddiga doorashada, isimada, iyo madaxda maamulka sii haya.
Doorashada Jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo bishan Agoosto gudaheeda, waxaana hadda si xowli ah u socda qaban qaabada iyo howlaha sugidda amniga.
Qaar ka mid ah musharraxiinta xilka madaxweynaha ayaa isaga baxay ka qeyb galka tartanka, iyagoo maamulka talada haya ku dhaliilay inaysan si wanaagsan wax u wadin.
Qodobka uu muranka ugu weyn ka taagan yahay ayaa ah go’aankii odayaasha dhaqanka loogu amray inay soo gudbiyeen magacyada saddex qof oo loogu tala galay in midkood ay guddiga doorashadu xildhibaannimada u xushaan.
Previous articleCashuurta Wasiirka Maaliyadu Wadaa Waa Sharci Daro… Xildhibaan Qabiile
Next articleNin gabadhiisa wajigeeda sameystay si uu xabsi uga baxsado